Sandals Resorts dia namoaka kapa vaovao nohavaozina Royal Bahamian
Home » Lahatsoratra farany farany » Hotels & Resorts » Sandals Resorts dia namoaka kapa vaovao nohavaozina Royal Bahamian
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • culinary • Kolontsaina • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao lafo vidy • Resorts • Tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Taorian'ny fanovana an-tapitrisa dolara, ny Sandals Resorts International (SRI) dia namoaka drafitra androany ho an'ny toeram-pisakafoanana feno tanteraka ao Nassau, Bahamas, ilay Sandals Royal Bahamian vaovao. Natao hankalazana ny toe-tsaina mora tohina ao Bahamas miaraka amin'ny traikefa azo avy amin'ny aingam-panahy eo an-toerana sy fomba fisainana maoderina sy maoderina amin'ny haitraitra, ireo mpitarika amin'ny fitiavana sy ny fitiavana ao amin'ny Sandals dia hanokatra indray ny hotely, spa ary nosy manokana nahazo loka ho an'ny vanim-potoana ririnina manomboka ny volana Janoary. 27, 2022.
Ny drafitra ho an'ny Sandals Royal Bahamian nohavaozina dia efa niasa nandritra ny telo taona.
Ity toeram-pitsangatsanganana nohavaozina ity dia hisokatra indray miaraka amin'ny trano fonenana vaovao mirentirenty, traikefa aingam-panahy eo an-toerana, fisakafoana nohatsaraina, sy ny maro hafa.
Ireo endrika vaovao dia ampahany amin'ny paikady lehibe kokoa manerana ny fikambanana mba hanehoana amin'ny fomba tena izy ireo toerana misy an'i Karaiba.
“Miantso ny rendrarendra izahay ary miantehitra amin'ny toe-tsaina miadana Ny Bahamas mba hanaterana traikefa tsy mampino sy tena izy araka ny tiana lazaina, mahatonga ny fitiavana ho mora", hoy ny filoha mpanatanteraka SRI Adam Stewart. “Avy amin'ny vohitra vaovao tanteraka misy villa tsy miankina miloko pastel sy Coconut Grove, ny efitrano fandraisam-bahiny sy fialamboly an-kalamanjana vaovao vaovao mankany amin'ny nosy an-dranomasina izay niova ho fialofana am-pitiavana, isaky ny fotoana rehetra, isaky ny fikasihana sy traikefa amin'ny vahiny dia ahitana an'io tsara tarehy io. tanjona. Tsy andrintsika ny hiarahaba ireo vahiny niverina tany Nassau sy ny vaovao Sandals Royal Bahamian. ”
Araka ny filazan'ny filoha mpanatanteraka SRI Adam Stewart, ny drafitra ho an'ny Sandals Royal Bahamian nohavaozina dia efa niasa nandritra ny efa ho telo taona ary tafiditra ao anatin'ny paikady lehibe kokoa manerana ny fikambanana mba hanehoana amin'ny fomba marina ireo toerana tsy manam-paharoa any Karaiba izay iasan'ny Sandals Resorts amin'ny famolavolana, vokatra. fanatitra sy fomba fanompoana mihaja.
Ny reimagined nahazo loka Sandals Royal Bahamian dia ahitana:
New Suites & Island Village
Sandals Royal Bahamian dia nanandratra ny safidin'ny trano fandraisam-bahiny miaraka amin'ny fanampin'ireo suite renirano malaza ao amin'ny East & West Bays vaovao, efitrano sy suite 200 nohavaozina tanteraka ary ny vaovao rehetra. Village Village. Ny vohitra vaovao miloko pastel dia nahazo aingam-panahy avy amin'ny vondronosy Bahamiana ary misy villa style butler izay samy nomena anarana avy amin'ny nosy iray any Bahamas manana dobo manokana.
Fanampiana vaovao amin'ny fananana dia Ahitra voanio, efitrano fandraisam-bahiny midadasika manitatra ny tora-pasika Bahamiana mankany afovoan-tanàna na andro na alina. Alokaloka amin'ny palmie voanio, ny toerana vaovao dia mirehareha amin'ny safidy seza tsara, mozika mivantana & fialamboly, fomba fijery tsy manam-paharoa amin'ny ranomasina ary kamiao sakafo vaovao 3. Sandals rehetra 'voalohany', ny vahiny dia afaka maka zava-mamy na kafe amin'ny Mamy n Tings, manaram-po amin'ny sakafo fusion Bahamiana sy hazan-dranomasina vaovao avy any an-toerana Coco Queen, na misafidiana klasika italiana amin'ny Bahama Mamma Mia.
Nosy tsy miankina iray
Tora-pasika aolo sy haran-dranomasina maro loko no miandry ao amin'ny nosy manokana mitokana, kapa Barefoot Cay. Afaka mandeha sambo mankany amin'ny nosy fiafenana ny mpivady ary mandany ny andro hifandray indray amin'ny morontsiraka mangina izay ahitana bar eny amoron-dranomasina, seza mahatsikaiky, douche ivelany ary trano fisakafoanana vaovao, Aralia House, manolotra hazan-dranomasina vaovao manomboka amin'ny sambo mankany amin'ny latabatra sy ny hanim-py Karaiba tena izy.
Fidirana aloha sy fombafomba hariva
Ho an'ny fahatongavana aloha, Sandals Royal Bahamian dia mandray ny fisavana mialoha miaraka amin'ny fandaharana vaovaony, Ny Breakaway. Rehefa tonga, ny mpampiantrano voatokana dia hitarika ny vahiny ho any amin'ny efitrano fialan-tsasatra miaraka amin'ny cocktail misy sonia eny an-tanana mba hamelombelona sy hizotra mivantana any amin'ny dobo ary hikarakara ny ambiny. Amin'ny filentehan'ny masoandro, ny mpivady dia afaka mandray anjara amin'ny fomban-drazana mitsoka conch izay lazaina fa miarahaba ny fitiavana sy ny vintana. Ny fombafomba dia miaraka amin'ny mozika rake sy scrape ary cocktails Bahamiana miaraka amin'ny tsio-drivotra.
Safidy fisakafoana vaovao
Sandals Royal Bahamian dia hampiditra trano fisakafoanana dimy vaovao rehefa misokatra amin'ity ririnina ity anisan'izany volom-borona ho an'ny sakafo frantsay mahafinaritra; British Pub nentim-paharazana Voahangin'ny Mpanjakavavy; Kanoo ho an'ny sakafo izay mankalaza ny faritra Karaiba, Butch's Island Chop House ho an'ny steak notapatapahina tanana, fillet trondro ary hazan-dranomasina voaomana hanafatra sy toerana sushi vaovao Soy.
Avy amin'ny giro mahazatra amoron-dranomasina manolotra burgers mahafatifaty sy salady vaovao ka hatramin'ny hanitra mampitolagaga amin'ny zava-manitra hafakely sy ny hanim-py japoney natono tsara, ny Sandals Royal Bahamian vaovao dia hirehareha amin'ny fitambaran'ny safidy fisakafoana 13.
Raha te hianatra bebe kokoa sy hamandrika fijanonana ao amin'ny Sandals Royal Bahamian vaovao, tsidiho sandals.com/royal-bahamian/renovations.
Sandals® Resorts dia manolotra olona roa am-pitiavana ny tantaram-pitiavana feno fitiavana, Luxury Included® any Karaiba. Miaraka amina toerana amoron-dranomasina 15 mahavariana ao Jamaika, Antigua, Saint Lucia, The Bahamas, Barbados, Grenada, ary 16th toerana tonga any Curacao lohataona 2022, Sandals Resorts dia manolotra fampidirana kalitao betsaka kokoa noho ny orinasan-tseranana rehetra eto ambonin'ny planeta. Signature Love Nest Butler Suites® ho an'ny tsiambaratelo sy serivisy; mpivaro-kena nampiofanin'ny Guild of Butlers English Professional; ny Red Lane Spa®; Misakafo 5-Star Global Gourmet ™, miantoka alika toaka ambony, divay misy vidiny ary trano fisakafoanana manokana ho an'ny gourmet; Aqua Centres miaraka amin'ny fanamarinana sy fampiofanana PADI® manam-pahaizana; Wi-Fi haingana avy amin'ny morontsiraka ka hatramin'ny efitra fatorianao ary ny Sandals Customizable Weddings dia sandan Resorts rehetra fotsiny. Sandals Resorts dia manome toky ny fandriam-pahalemana ho an'ny vahiny manomboka amin'ny fahatongavany sy ny fiaingany miaraka amin'ny Sandal Platinum Protocols ny fahadiovana, ny fepetra ara-pahasalamana sy fiarovana nohatsarain'ny orinasa natao hanomezana fahatokisana tanteraka ny vahiny rehefa miala sasatra any Karaiba. Sandals Resorts dia anisan'ny Sandals Resorts International (SRI) an'ny fianakaviana, natsangan'i Gordon “Butch” Stewart efa maty, izay ahitana Beaches Resorts ary orinasam-pivarotan-tseranana lehibe indrindra ao Karaiba. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fahasamihafana Sandals Resorts Luxury Included®, tsidiho ny sandals.com. www.fifanent.com.